पाएन अलैँचीले भाउँ, थन्कियो गोदाममै ! अब कहिले पाउँला त अलैँचीले भाउँ ? – HostKhabar ::
पाएन अलैँचीले भाउँ, थन्कियो गोदाममै ! अब कहिले पाउँला त अलैँचीले भाउँ ?
धनकुटा । अलैँचीको मुल्य नपाएपछि धनकुटाका कृषकले घरमै अलैँची थन्क्याउन बाध्य भएका छन् ।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ३, डाँडागाउँका विनोद थापाले पनि दुई वर्ष अघिदेखि पाँच मनभन्दा बढी अलैंची गोदाममै थन्काएका छन् । उनले अघिल्लो वर्ष पनि अलैँचीले राम्रो भाउँ नपाएपछि घरमै थन्काएका थिए ।
केही वर्षयता किसानले अलैंची गोदाममै थन्काएर राख्न बाध्य भएका छन् । तीन वर्ष अघिसम्म अलैंचीको भाउ प्रतिमन एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर अहिले बर्सेनी घट्दै आएको छ ।
अहिले अलैंचीको भाउ प्रतिमन ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । भाउ बढ्ने आशले किसानले अलैंची बिक्री नगरी घर–घरमै गोदाम बनाई थन्काएर राखेको महालक्ष्मी–३ का वडाध्यक्ष भरत थापाले बताउँछन् ।
संखुवासभासँग सीमा जोडिएको डाँडागाउँका प्राय सबै घरले अलैँची लगाएका छन् । चार सय ५० घरधुरी रहेको यस वडामा ८० प्रतिशत अर्थात तीन सय ५० भन्दा बढी घरधुरीले अलैँचीको व्यावसायिक खेती गरेका छन् । यहाँका किसानको अलैंची खेती प्रमुख आम्दानीको स्रोत अर्थात नगदेबाली हो । हरेक घरधुरीले कम्तीमा पनि १५ देखि २० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैंची लगाएका छन् ।
विगतका वर्षमा राम्रो भाउ पाउँदा किसानले हौसिएर अलैँची खेती गर्न थालेका थिए । तर अहिले उत्पादन दिने बेलामा उचित भाउ नपाउँदा किसान निरास छन् ।
अन्य स्थानमा खोलाखोल्सीमा अलैंचीको खेती गरिएको भए पनि यस डाँडागाउँमा भने अन्नबाली फल्ने ठाउँमा अलैंची खेती गरेका छन् । अधिकांश घरधुरीले अलैंची गोदाममै थन्काएर राखेका छन् ।
कतिपय किसानले दैनिक जीवनयापनमा समस्या पर्दा मात्रै अलैंची बेचेका छन् । राम्रो भाउ पाउने आशले फलेका अलैंची किसानको गोदाममा थन्किएका छन् । गोदाममा केही वर्षसम्म राख्दा पनि अलैंची नबिग्रिने भएकाले किसानले भाउ पर्खिन बाध्य भएका छन् ।
जिल्लामै अलैंची उत्पादनको हिसाबले अग्रपंत्तिमा आउने डाँडागाउँका अलैँची किसानलाई वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा अलैंची खेतीसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको कृषि प्राविधिक शेखर चापागाईंले बताउँछन् ।
आज मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस
आज असार १५ अर्थात् दही–चिउरा खाने दिन
कर्णालीले बनायो खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली
वीरेन्द्रनगरका टर्कीमा बर्डफ्लू देखिएपछि प्रशासनद्वारा डिस्पोज